I-eco retreat yothando
Indlu entle netofotofo ye-eco ebekwe kwilali ezolileyo yaseTaucho, kwisiqithi saseTenerife.
IFinca Dahlia ikwiTaucho, ilali encinci, entle kwisithili saseAdeje, ilizwe elikude nokhenketho olukhulu lweendawo zokuchithela iiholide eziselunxwemeni. ITaucho inomtsalane ongangcoliswanga kunye noyilo lwendalo yaseCanada kunye nezitrato ezithandekayo, ziyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokurhoxa ngoxolo. Indawo yayo ephakamileyo emalunga ne-850 m ngaphezu komphakamo wolwandle, inika indlwana kunye negadi yeembono ezimangalisayo zeentaba ezingqongileyo, unxweme kunye neziqithi ezingabamelwane. Emnyango kukho iindlela ezininzi zokuhamba ezibekwe ngaphakathi kwendawo entle erhabaxa, ilungele ukubukela iintaka, ukuzoba kunye nokupeyinta. IParagliding iyafumaneka nakwindawo ekufutshane. Olona lwandle lukufutshane luhambo lwemizuzu engamashumi amabini kunye nesikhululo seenqwelomoya saseTenerife Sur kwimizuzu engamashumi amathathu ukusuka kwindlwana.
I-Finca Dahlia yindawo ebanzi, eco-friendly cottage edibanisa ubunewunewu bale mihla kunye namava eeholide awodwa. I-cottage izimele kunye nokungena kwayo yangasese kunye neendawo zokupaka ezikufutshane simahla. Kutshanje ihlaziywe ngengcinga ukuba ibe kumgangatho ophezulu, kunye nemiqadi yayo yoqobo eyenziwe ngamaplanga ibuyiselwe ngothando kwaye izinzileyo, izinto zendalo okanye ezihlaziyiweyo ezisetyenziswa apho kunokwenzeka kuyo yonke indawo. Indawo yokuhlala eqaqambileyo nenomoya, enembonakalo yayo evulekileyo kunye nesibhakabhaka, iqulathe ibhedi yobukhulu bokumkani kunye nebhafu ekhululekileyo enikezela iimbono ezintle zonxweme emini kunye nokutshona kwelanga kunye nesibhakabhaka esineenkwenkwezi ebusuku. Kukwakho nesitshisi selog esisebenzayo kubusuku obupholileyo basebusika kunye nebhotile yewayini.
UFinca Dahlia uqeshiwe exhotyiselwe ngokupheleleyo ukuhlala kwakho. Indawo ephambili inesofa, itafile yokutyela kunye nezitulo. Indawo yasekhitshini inesipheki esineehotplates ezi-4, i-oveni kunye negrill kunye nefriji inesikhenkcisi esincinci. Amanzi okupompoza kumasipala waseAdeje kukhuselekile ukusela. Kubonelelwa ngeti, ikofu kunye nezixhobo zokupheka ezisisiseko ezifana netyuwa, ipepile, ioyile kunye nemifuno. Igumbi lokuhlambela lineshawari epheleleyo, isitya sokuhlambela kunye nendlu yangasese eyomileyo. Kukho indawo yokugcina impahla kunye nezixhobo zokuhamba. I-cottage inegadi yabucala eneembono ezimangalisayo. Kukho enye itafile enezihlalo kunye neparasol apha. Ngaphantsi kwendlwana kukho indawo enkulu ehonjisiweyo enechibi, indawo yokuhlala yomlilo ngakumbi kunye nokufikelela kwigadi yeziqhamo.
Inkonzo yokuhlamba iimpahla iyafumaneka xa uyicelile.
4.98 · Izimvo eziyi-85
I-Taucho yidolophana encinci kwaye ezolileyo egcwele isimilo. Kukho ibha yendabuko yaseCanarian / indawo yokutyela ekumgama wemizuzu emi-5 ukusuka kwindawo yokuhlala kodwa akukho venkile okanye izithuthi zikawonke-wonke ngoko ke imoto iyacetyiswa. Ukulandwa kunye nokwehla kwisikhululo seenqwelomoya kunokufumaneka ngesaziso sangaphambili.
Umamkeli uhlala kufutshane kwaye uyafumaneka ukunceda xa kuyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Adeje